ICroatia Inombolo Yocingo | Izinhlu Zomakhalekhukhwini | Database lakamuva Lokuposa
ICroatia Inombolo Yocingo
Database lakamuva Lokuposa » ICroatia Inombolo Yocingo
Izinombolo zocingo zaseCroatia
Uhlu lwezinombolo zocingo lwaseCroatia lungakusiza ukuthi uthole amakhasimende amasha ukuthola uhlu oluhlosiwe lokuhanjiswa kokuthengiswa kweselula. Database Lokungena Kamuva Lokunikeza uhlu lwabathengi be-Telemarketing kuyinto eyi-100% yamanje futhi inembile. Uhla lwethu lokukhangisa ngocingo olubhekisiwe lubamba iqhaza elikhulu kwimpumelelo yomkhankaso wakho wokukhangisa.
Uhlu lwezinombolo zocingo lwaseCroatia lokumaketha nokuthumela ukunikela ngebhizinisi lakho kulolu hlu lungakunika imininingwane yokuxhumana ngokushesha namagama ayi-5,000 namakhasimende, amakheli, izinombolo zocingo nokunye okukhethekile okukhethiwe ukukusiza ekutholeni lokho ongakuhlelela.
Thenga iCroatia Consumer People Ucingo Ucingo
Uhla lwamakhasimende weCroatia
Uhla lwabathengi beCroatia mhlawumbe luyindlela engcono kakhulu yokufinyelela abantu, bakhombe amakhasimende esizayo noma ngabe bakuphi. Lokhu kuvame ukuba ngcono kunokuba kuthunyelwe i-imeyili ohlwini lwakho lwababhalisile oxhumana nabo okukhethwa kukho umthengi okukhethwa kukho umakhalekhukhwini ophethe namakheli we-imeyili naweposi wemikhankaso eneziteshi eziningi ezifana nokuthengisa izingcingo, ukumaketha amaselula, ukumaketha ama-sms, ukumaketha nge-imeyili kanye nemikhankaso yokubiza amakhaza.
I-Database yakamuva Yokuposa noma isayithi yakamuva yedatabase.com iyindawo ethembekile kunazo zonke yokuthumela uhlu lwabathengi beCroatia kwesokudla ukuze ubhekabheke ngokushesha ukufinyelela abathengi abaningi okubhekiswe kubo ukumaketha nokuthengisa yonke imikhiqizo yakho nezinsizakalo zenkampani yakho.Lokhu kungenza insiza yakho yamakhasimende isebenze kangcono ithembekile ukuncenga ikhasimende lakho ngokuthenga imikhiqizo yakho noma izinsiza zakho.
Uhlu lwabathengi beCroatia noma uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi oluvela kuDatha Yokugcina Yamatekisi noma i-latestdatabase.com iqukethe okulandelayo:
Amarekhodi angama-5,000 avuselelwe anembile aqoqwe kusuka kumapulatifomu ahlukile athembekile
Ukukunikeza intengo engabizi kakhulu efinyelela ku- $ 250
Inkokhelo yesikhathi esithile
Isoftware ethathekayo esheshayo engaba ifomethi yefayela le-Excel CSV
Ungakhetha noma yiziphi izindlela zokukhokha ezilandelayo;
Ikhadi le-Visa, ikhadi le-Master, PayPal, skrill, Western Union nezindlela eziningi zokukhokha ongazenza.
ICroatia Inombolo Yefoni Umbuzo & Impendulo